विराटनगरमा जुत्ताचप्पल मेला शुरु साठी प्रतिशत सम्म छुट
विराटनगरःनेपालमा वार्षिक रुपमा ७ करोड जोडी जुत्ताको खपत छ । यो माग आउँदो वर्ष १० करोड पुग्दैछ । नेपाली उत्पादनले वार्षिक मागको वार्षिक ६० प्रतिशत थेग्छ ।
विराटनगवरमा सोमबार शुरु भएको दोस्रो जुत्ताचप्पल मेला उद्घाटनका अवसरमा उत्पादकले दिएको जानकारीअनुसार जुत्ता चप्पल उद्योगमा रु. १७ अर्ब लगानी छ । जुत्ताघरका संचालक तथा होमनाथ उपाध्यायले भने,‘‘देशभर साना ठूला गरेर एकहजार पाँचसय उद्योग संचालनमा छन् । ती उद्योगमा प्रत्यक्ष रुपमा ५० हजार र अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी पाएका छन् ।’’ उनले यति रोजगारी सिर्जना हुँदा काम गर्नको लागि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने सोचमा कमी आएपनि दक्ष श्रमिकलाई उद्योगमा टिकाउन भने निक्कै मुश्किल हुने गरेको दृष्टान्त सुनाए ।
प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरस्थित जैनभवनमा शुरु भएको जुत्ताचप्पल व्यापार मेलाको उद्घाटन उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिशप्रसाद कुसियैतले गरे । भने,‘‘स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन नै ठूलो कुरा हो । जुत्तामा नेपाल लगभग आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुग्नु सकारात्मक विषय हो । ’’ उनले प्रदेश १ ले समेत औद्योगिक उत्पादनका आधारमा राष्ट्रिय आयमा ठूलो योगदान दिने गरेको सुनाए ।
कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार नेपालमा वार्षिक रु. ३२ अर्ब बराबारको जुत्ताचप्पल बिक्री हुन्छ । कारोबार बढ्दो क्रममा छ । जुत्ता घरका संचालक उपाध्यायले भने,‘‘७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याएर जुत्ता उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ तर सानाठूला उद्योगले माग थेग्न सकेका छन् ।’’ उनले सरकारले बजेटमा समेत यो व्यवसायको प्रवद्र्धनको लागि कार्यक्रम समेट्नु सकारात्मक भएको बताए ।
मोरङ व्यापार संघका कार्यबाहक अध्यक्ष नविन रिजालले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकास तथा प्रवद्र्धनको लागि मैत्रीपूर्ण कानुनहरु ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए । विराट व्यापारा संघका अध्यक्ष सुजन थापाले भने,‘‘जुत्ता बाहिरसमेत निर्यात हुने सकेको अवस्थामा यो उद्योगलाई राहत दिनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले उद्योगमैत्री वातावरणको खाँचो रहेको बताए ।
पन्ध दिनसम्म चल्ने मेलामा विभिन्न नेपाली ब्रान्डका जुत्ताचप्पल बिक्रीका लागि राखिएको छ । मेलामा १५ देखि ६० प्रतिशतसम्म छुटको समेत व्यवस्था छ । अघिल्लो वर्ष पनि विराटनगरमा यस्तै जुत्ताचप्पल मेला आयोजना गरिएको थियो । हाइलाइफ जुत्ता उद्योगका संचालक विकास चौधरीका अनुसार नेपाली ब्रान्डलाई चिनाउन, व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न र नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्ने बानी बसाउन मेला आयोजना गरिएको हो ।